မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် Linux နှင့်ပူးပေါင်းပါသလား။ | Linux မှ
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် Linux နှင့်ပူးပေါင်းပါသလား။
လီယို | | NOTICIAS
သော်လည်း FromLinux Linux ကမ္ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်းရှိတယ်။ တစ်ခါတလေတော့အခြားမီဒီယာတွေကိုလည်းလေ့လာတယ် ဂူဂဲလ်သတင်း။ ဒီကနေ့ငါတိုင်းပြည် (အာဂျင်တီးနား) လို့ခေါ်တဲ့သတင်းစာမှာသိချင်စိတ်ပြင်းပြတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ် စာမျက်နှာ 12။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်:
Picasso နှင့် Rembrandt တို့သည် Linux အတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကြာ Linux ၏အဓိကရန်သူဖြစ်သောမိုက်ခရိုဆော့ဖ်အကြောင်း။ kernel ကို code လိုင်းများ၏အဓိကပံ့ပိုးဖြစ်လာခဲ့သည် ကောင်းစွာပွင့်လင်းယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ရင်ဘတ်မှဂုဏ်ယူတစ်ရိုက်ချက်ထိုက်တန် - နှင့်မည်သို့ကြောင့်သူက lackluster ဖြစ်လာသည် LinuxCon ကိုစပွန်ဆာပေးသည်ဒီနှစ်ဘာစီလိုနာမှာကျင်းပမယ့်ဥရောပ Linux ညီလာခံကပျော်စရာမကောင်းဘူး။
ကုမ္ပဏီ၏လက်ရှိစီအီးအိုစတိဗ်ဘောမားကလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က“ Linux သည်ကင်ဆာနှင့်တူသည်” ဟုပြောကြားခဲ့ပြီး၎င်းကိုအမြစ်မှနုတ်ပစ်ရမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် မိုက်ကရိုဆော့ဖသည် Kernel အတွက်ကုဒ်လိုင်းများပေါ်တွင်စတင်ပူးပေါင်းခဲ့သည်အဓိကအားဖြင့် Linux လောကမှမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကုဒ်မတည်ရှိသောကြောင့် developer များနှင့်ဆက်ဆံရေးသည်လုံးဝမကောင်းမွန်ခဲ့ပါ။
အဆိုပါပြproblemsနာများကို“ ကုစား” သည်ဟု Linux picassos မှ Greg Kroah-Hartman ကပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါပြproblemsနာများကဲ့သို့တူညီသော ဦး တည်ချက်သို့ပွေးလေ၏ အန်းဒရွိုက်, နှစ်ပေါင်းများစွာငြင်းပယ်ခံရပြီးနောက်သူ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို Linux တွင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ "သူတို့ကစမတ်ဖုန်းသန်း ၁၀၀ ရောင်းတယ်။Linus Torvalds သည်ဘာစီလိုနာရှိ Fira ဟိုတယ်၌သူပြောခဲ့သောအဓိကဟောပြောချက်ကိုပြောကြားခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Jim Zemlin က“ post-desktop မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကိုကြိုဆိုပါတယ်၊ မင်းဟာကမ္ဘာကြီးကိုကွဲပြားခြားနားစွာတွေ့ရလိမ့်မယ်” လို့ပြောခဲ့တယ်။ Zemline က“ စမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်အခြားကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများကြောင့်၊ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ရောက်ရှိမှုသိသိသာသာကျဆင်းသွားသည် 30 ခုနှစ်တွင် 2012 ရာခိုင်နှုန်း "။
အဆိုပါဆောင်းပါးအင်တာဗျူးနှင့်အတူအောက်ပါအတိုင်း။ သင်ဖတ်နိုင်သည် http://www.pagina12.com.ar/diario/cdigital/31-207688-2012-11-13.html
ငါအမှားနားမလည်ခဲ့ရင် မိုက်ကရိုဆော့ဖသည် Kernel နှင့်ကူညီခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းလား။
ဒါကထူးဆန်းပြီးငါ့ကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ရမလားမသိဘူး။ အမှန်တရားကတော့ထိပ်တန်းဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီတွေပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်တာကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါဖြစ်လာနိုင်တယ်၊ ငါမသိဘူး၊ နည်းနည်းအန္တရာယ်များတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » NOTICIAS » မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် Linux နှင့်ပူးပေါင်းပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ သို့သော်ထို "ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ" သည်များစွာသော virtualization software သို့မဟုတ် Azure (သူတို့၏ cloud computing platform) မှတစ်ခုခုကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။
မိုက်ခရိုဆော့ကိုမုန်းသူများ၏စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် (ကျွန်ုပ်သည်ဤကိစ္စနှင့် ပါတ်သက်၍ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်) ဗားရှင်းတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ကုဒ်အများစုကိုပံ့ပိုးပေးသည့်တစ်ခုမှာ Microsoft ကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်သည် (အကယ်၍ မှတ်မိလျှင်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က Linux ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ မှန်ကန်စွာ။ ) ။
အတိအကျ Linux နှင့်ပတ်သက်သည့် Microsoft ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးသည်၎င်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည် Virtualization ပြissueနာကြောင့်ဖြစ်သည်။
သေချာတာပေါ့၊ အခုငါ Skype ကိုဘယ်လို ၀ ယ်တယ်ဆိုတာကိုငါသတိရပြီ၊ အဲဒါကအဲဒါနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်။
သူတို့ Mensseger ကို Linux အတွက်သီးသန့် port လုပ်ရင်ငါစိတ်မဆိုးဘူး
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၂၀၁၃ မှာအငြိမ်းစားယူပြီး ၄ င်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို Skype နဲ့ပေါင်းစည်းထားလို့ဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒါအမှန်ပဲ? မင်းမှာအရင်းအမြစ်ရှိလား။ ငါစိတ်ဝင်စားတယ်။
လီယို, ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသူတို့ messenger ကို၏ပိတ်သိမ်းကြေညာခဲ့သည်သောသတင်း, ဖေ့စ်ဘွတ်နှင့် Twitter အတွက်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခဲ့သည် !!! xD
အို၊ အိုငါ့ကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်ဆိုးတာလဲမသိဘူး။ ငါလုံးဝဆန့်ကျင်နေသောကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဂူအဒစ်ဆန့်ကျင်သောကြောင့်၊ ၎င်းငွေသည်ငွေလဲလှယ်ခြင်းဖြင့်ဖြန့်ဝေသောအရာအားလုံးကို“ တီထွင်ခြင်း” မရှိသောကုမ္ပဏီသည် EL KERNEL ကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ဤသည် GNU / Linux ကိုနှင့်အတူခိုင်မာပြန်လည်ဆန်းသစ်သောသူသည်နှိမ့်ချအမြင်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါနားလည်သည် MS သည် linux kernel အတွက်ကုဒ်လိုင်းပေါင်းတစ်သောင်းကျော်ရေးခဲ့သည်
အဲဒီမှာစာရင်းရှိပြီးငါ Microchot မမြင်မိပါဘူး
ယခုငါမြင်ရပြီ Amd သည် Kernel နှင့်တိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းရန်တာဝန်ရှိသည့် ၀ န်ထမ်းများကိုရာထူးမှဖယ်ရှားပြီးနောက် Gold အပိုင်းတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဒါကငါသဘောပေါက်သောအရာကို ... ဘယ်လောက်ထူးဆန်း။
၎င်းသည် linux ဖောင်ဒေးရှင်း၏အသင်းဝင်များစာရင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာငွေထည့်သောသူများဖြစ်သည်။ သူတို့ပိုက်ဆံများများပေးလေလေအသင်းဝင်လေလေဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည် code လိုင်းပုံစံဖြင့်ပူးပေါင်းသူများနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ။ kernel နှင့်ပူးပေါင်းရန်သို့မဟုတ် linux ဖောင်ဒေးရှင်း၏အသင်းဝင်ဖြစ်ရန်အတွက် linux Foundation ၏အသင်းဝင်ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားမှာ code အရ၊ Hiper-V driver နှင့်ဆက်စပ်သောထောင်ဂဏန်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ငါအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့မှတ်ချက်ထဲမှာရှင်းပြတဲ့အတိုင်း, Microsoft ကအဓိကပံ့ပိုးသူအမှန်တကယ်မှားယွင်းသောဖြစ်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ငါက kernel ကိုမှမဆိုအလှူငွေကနေလာသမျှသည်, ကြိုဆိုသင့်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတွင် Linus Torvalds သည် ၀ င်ရောက်လာခြင်းနှင့်မ ၀ င်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးစကားလုံးရှိသူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Microsoft သည်၎င်းတွင် "မကောင်းသော" အရာအားလုံးကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်ဟုမကြောက်မိပါ။ 🙂
AMD စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ငါအများကြီး, ဤမျှလောက်များစွာသော, ဤမျှလောက်အရေးကြီးသောပူးပေါင်းမြင်ချင်ပေမယ့်။
၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောသဘောသဘာဝရှိရန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့သည် Linux ကဏ္ sector ကိုအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသောကြောင့်ဤအရာသည်အသုံးမတည့်မှုဖြစ်သည်။ ဆာဗာအများစုသည်အချို့သောမူကွဲဗားရှင်းကိုသုံးကြသောကြောင့်၎င်းတို့သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဒီရည်မှန်းချက်အတွက်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ငါဟာပူးပေါင်းကြံစည်သူ၊ အကြောက်လွန်ရောဂါလား၊ ဒါမှမဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ငါဖြစ်ရင် OpenBSD ဒါမှမဟုတ်ဒီ xD လိုတစ်ခုခုကိုသုံးလိမ့်မယ်။
naaaah, micro $ oft သည် code ထဲသို့လိုင်းများထည့်ရန်အလွန်ဆိုးရွားသည်ဟုမထင်ပါ၊ အကယ်၍ ၎င်းသည်တကယ်ဆိုးရွားပါက developer များကထိုအရာကိုဖော်ထုတ်။ ထုတ်ဖော်လိမ့်မည်။ ) ဦး
AMD အတွက်တော့ဆန္ဒပြမှုတစ်ခုအနေနဲ့ Nvidia ကဒ်ကို ၀ ယ်ပြီးငါ့ ati ati ကဒ်ကိုရောင်းလိုက်သည်
AMD အတွက်ဆန္ဒပြမှုတစ်ခုအနေဖြင့် Nvidia ကဒ်ကိုဝယ်ပြီး atiah ကဒ်ကိုရောင်းသည်။
အလွန်ဆိုးလွန်းသော FreeBSD သည်နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အလွန်ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် GNU / Frankerlinux စနစ်များရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်အားထိပ်တန်း Linux ပံ့ပိုးသူများအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းပြောဆိုချက်သည်အဓိပ္ပါယ်မဲ့နေပြီး Phoronix သည်လွန်ခဲ့သောတစ်ချိန်ကအင်တာနက်ပေါ်ရှိလူအများနားလည်မှုလွဲမှားသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ Linux 3.0 ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပထမသီတင်းပတ်များအတွင်းသင်သည်ကျူးလွန်မှုအရေအတွက်ကိုရေတွက်လျှင်၎င်းသည်အများစုသည် Microsoft ၀ န်ထမ်းများထံမှလာခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာမိုက်ကရိုဆော့ဖ် ၀ န်ထမ်းသည်ထိုရက်သတ္တပတ်များအတွင်းလုပ်ငန်းကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတင်ပြရန်နှင့်ကတိက ၀ တ်များစွာကိုခွဲဝေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကုဒ်ကသိပ်မများဘူး၊ လိုင်းပေါင်းတစ်ထောင်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ထောင်လောက်ဆိုပါစို့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Linux ကိုပံ့ပိုးသူတွေဆီကထိပ်ဆုံးငါးရာကိုသင်လုပ်မယ်ဆိုရင်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကိုတွက်ချက်မှာမဟုတ်ဘူး။
ယခုအခါတွင် Microsoft ၏ကျူးလွန်မှုစုစုပေါင်းကို Hiper-V driver သို့အကျဉ်းချုံးလိုက်သည်။ ၎င်းသည် Windows တွင်အသုံးပြုသော Linux virtual machine များအတွက်လိုအပ်သည်။
* မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် Linux အတွက် code ထောင်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုသာဖြန့်ချိခဲ့ပြီး ၄ င်းတို့အားလုံးသည် Hiper-V driver အပေါ်အာရုံစိုက်သည်။
* မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် Linux နှင့်ပူးပေါင်းရန်စိတ်မ ၀ င်စားသော်လည်း၎င်း၏ Hiper-V driver ကို GPL အဖြစ်ထုတ်ပြန်ရန်လိုအပ်သည်။
အထက်ကပြောခဲ့သလိုပဲမှတ်ချက်အချို့မှာဖတ်မိတဲ့အခါမိုက်ကဲ့သလောက်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးပါ။ ပူးပေါင်းပါ။ helena_ryuu ပြောခဲ့သလိုပင်ရပ်ရွာလူထုအနေဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးအဓိကပြိုင်ဆိုင်မှုမှထွက်ပေါ်လာသည့်အရာတစ်ခုကို ပို၍ ပင်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နောက်မှတ်ချက်တခုမှာတော့ Mensseger ရဲ့ရက်တွေကိုရေတွက်ပြီး Skype နဲ့ပေါင်းစည်းလိမ့်မယ်လို့ငါဖတ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ရင်းမြစ်လိုချင်ပါတယ်
ကောင်းပြီ၊ အခုသူတို့ Linux အတွက်ဗားရှင်းလုပ်မလား၊ အနည်းဆုံး Wine မှာအပြည့်အဝလည်ပတ်နေလားကြည့်ရအောင်။
Ankh …ကောင်းပါတယ်၊ ငါဒါကိုဘယ်တော့မှရေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
Microsoft ၏ပူးပေါင်းမှုအများစုသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖောက်သည်များအတွက်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဖောက်သည်များအားပျော်ရွှင်စေရန်သင်တစ်ခုခုထည့်ဝင်သင့်သည်မှာထင်ရှားသည်။ ထို့အပြင် GNU / Linux သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်နေပြီး Microsoft ၏အကြီးမားဆုံးခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်သည်။ တကယ့်ငွေသည်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပြူတာများမဟုတ်ဘဲဆာဗာများ (၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်) ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးစားဆာဗာအများစုသည် Microsoft နှင့်အလုပ်မလုပ်သော်လည်း၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အခြား terminal များသည် GNU / Linux distro အချို့ကိုလည်းသုံးသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ငါမသိ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ shit ပြောနေတာ။
ပြောင်းလဲမှုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများသည်စစ်ထုတ်မှုများစွာကိုဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့်၊ ၎င်းသည်အန္တရာယ်မကင်းသောကြောင့်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကလာပြီး "အခုငါဒီဝတ်ဆင်ချင်တယ်" ဟုပြောခြင်းမဟုတ်ဘဲပြောင်းလဲခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။
Linus Torvalds သည်ဤအပြောင်းအလဲများကိုထပ်မံထည့်သွင်းရန်နောက်ဆုံးတွင်သူ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုပေးသည်အထိ…လိုင်းအသစ်များသို့မဟုတ် algorithms အသစ်များကိုတင်ပြသည်။
Linus သည်မကြာသေးမီကသူသည် code ကိုဖတ်ရှုခြင်းမရှိတော့ကြောင်းကြေငြာခဲ့သော်လည်းအခြေခံအားဖြင့်အတည်ပြုသူ ၂ ဦး အားယုံကြည်သည်ဟုဆိုသော်လည်းအပြောင်းအလဲများသည်စစ်ဆင်ရေးများနှင့်စမ်းသပ်မှုများစွာမှအောင်မြင်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
kernel.org မှ tar.bz2 မူရင်း tar.bz3.0 တွင် Microsoft Hyper-V ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာထားရှိပြီး၊ "xconfig လုပ်သူ" နှင့်အခြားအရာများသည်၎င်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်အချို့အံ့သြမိသည်မှာ၎င်းသည် kernel XNUMX ၏အသစ်အဆန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် http://www.h-online.com/open/news/item/Microsoft-contributes-a-lot-of-changes-to-Linux-kernel-3-0-1280528.html သူတို့ကထိုဗားရှင်းတွင်အပြောင်းအလဲ ၃၆၁ ခုနှင့်သတ္တမမြောက်ပံ့ပိုးသူဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ကဲ့သို့ဆက်လက်ထည့် ၀ င်မှုရှိ၊
ငါ့စာတန်မှရှောင်ရန် !!!!! ။
Redmond သူများသည်၎င်းတို့ကို ဆက်လက်၍ ပြောဆိုကြသော်လည်း၎င်းတို့သည် operating system အသစ်နှင့်အထူးသဖြင့် hardware market အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ရန်မျှော်လင့်ထားသည့်အောင်မြင်မှုမရှိကြောင်းကိုလည်းလူသိများသည်။ အတော်များများကကျွမ်းကျင်သူများစွာသည် Linux ကုမ္ပဏီမှအကြီးအကျယ်အစားထိုးခဲ့ပြီး၎င်း၏ application များနှင့်ဖြေရှင်းမှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သင့်ကြောင်း၎င်း၏ operating system ကိုမေ့လျော့ရန် windows ကုမ္ပဏီအားအကြံပြုခဲ့သည်။
မည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်လမ်းလျှောက်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်ရွေးချယ်စရာ ၂ ခုသာရှိသည်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏လွယ်ကူသောအရာမရှိပါ။ ၎င်းတို့အနက်တစ်ခုမှာ Apple နှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်ပြီးဒုတိယတစ်ခုမှာလိုင်းပေါ်တွင်ရှိသောလခစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်များ (Novell နှင့် Red Hat စတိုင်) ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ နှင့် Unix၊
အရူးထင်နေတာလားဒါပေမယ့်မစ္စတာငွေကိုမိုက်ခရိုဆော့ကုမ္ပဏီကအမြဲတမ်းချမှတ်ထားတယ်၊ ပိုပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ကမ္ဘာမှာလွှမ်းမိုးချင်တယ်ဆိုရင် (ကံကောင်းတာကသူတို့ကိုမဟုတ်ရင်) လွှမ်းမိုးဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိဘူး။ မင်းဘယ်လိုထင်လဲ
ဥပမာအားဖြင့် Messenger ကို Skype နှင့်ဆက်သွယ်လိုက်သည်နှင့်၎င်းသည်ငွေပေးချေမှုကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းသည် messenger သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာများကိုအသုံးပြုရန်အကြွေး ၀ ယ်ရန်များစွာဖိအားပေးနိုင်သည်။
ဆာဗာများတွင်နံပါတ်တစ်မှာ LINUX ဖြစ်ပြီးစမတ်ဖုန်းများ၊ တီဗီများ၊ တက်ဘလက်များတွင်မကြာသေးမီကလူကြိုက်များလာခြင်း၊ သတင်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါက k HW ထုတ်လုပ်သူများကသူတို့၏ထုတ်ကုန်များကို LINUX အပေါ် အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်နေကြသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ Nolkia, Samsung, etc) အပြင်သူတို့က KDE plasma လိုမဟုတ်ဘဲအချို့သော desktop လုပ်ဆောင်ချက်မှ code ကိုခိုးယူနေသည်။
ဟိုးမား - Unity-style KDE
သင်၏ဖြန့်ဖြူးခြင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသော application များကိုမည်သို့ပြန်ယူရမည်နည်း